Sidee Baan u Noqon Karaa Qof Naftiisa ku Kalsoon? |
Kalsoonidu waa lagama maarmaan waana shay qiime aad u ballaadhan ugu fadhida xasilloonida nolosha, qofkasta oo banii-aadamah,taas la’aanteedna aan marnaba la gaadhi Karin himilada iyo geedi socodka nolosha qofka baanii-aadamka ah.Waxa aad barataa naftaada miisan caqligaaga maskaxddaada waxa ku jira gudahaaga miisan saar oo noqo qof naftiisa yaqaan, ha ku xidhin naftaada wax keliya in badan waxa aad furtaa maskaxdaada oo aad bilowdaa in aad kaga shaqaysiiso oo aad wax badan shaqadeeda u dhiibto. Waxa aad kaashataa saaxiibada wanaagsan ee ku sheegaya waxa aad ku wanaagsan tahay.
Waayo saaxiibkaa waxa uu naftaada ka ogyahay wax aadan ogayn, tusaale ahaan waxa ogyahay wax aad ku fiicantahay ee aad ka soo bixi karto, marka horena waa in uu noqdo saaxiibkaa, wanaagsan oo khayrka kula jecel wax walba oo xuna kula neceb, waxa aad ku garataa in uu saaxiibkaa ku jecelyahay oo wanaagsan yahay waa ka marka aad wax xun ku dhacdo ku qabta ee ku yidhaa saaxiib waxa se waa wax xun, waaka mar walba kuula dhaqma oo jecel in aad isku raacdaan meelaha wanaagsan wanamid ku naasteexeya mar walbana ku xasuusiyay Allah swt.
Waxa aad kaashataa macallinkaaga ha noqdo midka masjidka wax kugu bara ama iskuulka ama jaamacadda mar walba la tasho oo ka qaado, wax waanagsan ee naftaada u kordhin kara in aad guulaysato oo aad gaadho meesha aad rabto kana qaado nasteexooyinka wanaagsan.haddaba Kalsoonida nafta waxa weye qofka usuurro geliyain uu la qabsado deegaanka ku harreeraysan hadday noqonlahayd qoyskaga, shaqada iyo saaxiibadaba, In uu nolosha dhex jibaaxo guulna gaaro.
Kalsoonida naftu waxa ay qofka ka dhigtaa mid adag oo aqoonna u leh heerka uu bulshadiisa ka joogo waxa ayna qofka dhaxalsiisaa horumar joogto ah , kaasoo ka dhasha dulqaadka iyo dedaalkiisa. Waxa uu qiimeeyaa noloshuu ka soo gudbey waxa aannuu daah-faydaa mustaqbalkiisa waxa uu ku kalsoonyahay naftiisa kuna farxaa guulihiisa, una haanqal taagaa mustaqbal fiican, Kalsoonida naftu waxa ay u baahantahay in qofku aqoon buuxda uleeyahay naftiisa iyo xaaladdiisa caafimaad, rumaystan naftiisa isaga oo aan xaqiran.
Tixdan oo magaceedu yahay “Higil” waxa halabuuray Abwaan Xasan Daahir Ismaaciil (Weedhsame). Waxa ay tilmaamaysaa tubta uu aadamuhu ku guuleysto oo ay u aragtohanka, himilada hayalka san.Waxa ay dhiirrigelinaysaa damiirka suubban iyo fallaadka hufan, iyada oo ka digaysa hunguriga oo horrseed u ah alabbada hadimeeya horu-socodnimada qofka. Guud ahaanna, waxa ay ku qotontaa falsafad dhiirriyeysa dadnimada hufaan iyo qofnimada suubban.
Nimaan hadal hooyadii Hadhuub ma tidhaahdo hoo Haaheey af-gobaadsigaana Habeen baa lagu dhaxaa Saaxiib huga eegayaa aana Jiilaalkaad kala hadhan Heer heer weeyaan da’duna Wedkuna waa lama huraan. Hantida rajadaa ka weyn Hammiga fulintaa ka roon Kasha laga hawl galaa Kaskuna halistuu tusaa Haantaaqo ishan arkayn Dadkana hoodaan masayn Adduunkuna waa hagbade Hadhow iyo waa kalkaa Heddaada jartee ogow. “harraad biyo maad na siin
Daantuna waa hadal-yaqaan.
Hoo-duna waa ii hambee
Haye-du waa igu hallee
Faq hoosana waa huraal
Kalsooniyo hiil dahsoon.
Furfuray haantan lingaxay
Runtan huurshaa baxdee
Toloow yaa helay sirtii?
Haanneeyey hashii luntee
Hadhuubka la heemiyoow
Ciddii huubaha lahayd
Hambada orodoo u gee.
Haldhaa geri baan jeclaa
Inaan hootada daree
Halgaad iga baydhaybaa
Bishaaro hungooy bal sheeg
Hawaawi daantayda qumi
Dhedooy haamaha biyee
Haantaaqooy noo miciin
Heydaarooy waan ku tebay
I haano beeneey i hoo”
Haasaasuhu waa sidaa
Hog baan degayaa xidhxidhan!!
Ma joogo halkii shalay
Gadaal uma haybsan karo
Haankaygu waxa uu ka koray
Haddana ma hilmaami karo
Hammiyo gocashan dugsaday
Hir iyo laac baa i hoday
Intan helay maan hambayn
Intan huray maan hibayn
Hubaal nafta maan habayn
Ka hiiliyey haybaddii
Hillaabtay hagoog iblays
Alleylehe waan haftee
Dardaaraanka habi ogaa
Habheeb kuu diri ogaa
Halgaad kuu dagi ogaa
Higsoow daalaye i daa!!!!!!
Haan-weynidu yaab lahaa
Hilbay nacaysaa ag yaal
Haadan ka lushee fogbay
Misana ku hadaaqaysaa,
Hal bay hal ugeynaysaa
Hal baanay ka goynaysaa
Hadhaa hal ka buuraan bay
Misana kugu hawlasaa,
Go’doon iyo hayjad bay
Habeen kugu oodaysaa
Huluul laga maagay bay
Hayaa aan kugu geynaysaa
Dadkoo hilin jeexday bay
Hareer uga baydhaysaa
Naftay la heshiisay bay
Hujuun ku bilaabaysaa!!!!!!!!
Hilowgu jahayn ogaa Hufnaantuna dhibi ogaa
Naftuu helay uu hagaay Hunguri waa meel sokee
Haan iyo shilin keed rabtaa?
Markuu hayin kuu noqdaad
Habaas laga baaqsadaa
Hayaa aankana wuu ladhaa
Hir doogle ku geynayaa,
Wixii ku hoduu hiraa
Kashuu hal’adayg faraa
Samuu u horseed noqdaa
Xumuu ka hagaag idhaa
Haankana himiluu tusaa
Halyey diriruu noqdaa
Markay ku bidaan hocoo
Hawaankana wuu nacaa
Halbeega runtuu sidaa
Hawraarta daantuu tirshaa
Nafluhu hadh u jiidi waa.
Indhaha lagu halacsadaa
Naflaha lagu harawsadaa
Haddeer wax taagaanbuu
Hadhow ka hilaadiyaa.
Waxa uu hebel ruuxu yahay
Intanu heshiis la gelin
Naftiisa markuu hagrado
Hadhkiisa markuu dirsado
Hambaana qaatuu darsado
Sidii awrkiyo hashii
Habeed goortuu marsado
La hiif-hiif laana habaar
Haasaawaha lagu cidlee
Nin toocsiga lagu hujuun
Agtiisana laga hayaa aan
Ceebtiisana lagu hadaaq
Hadoodilaan weedh dahsoon
Kor iyo hoos loogu maag
Hugiisu xasuusan waa
Kolay tahay hooyadii
Waxa ay kashu huursataa
Wejigu heel soo dhigaa
Huruufkuna waa dhambaal
Haamuu awrkaasi sido Is-leeg buu kula hinqaday
Dadkuna hayin kama dhacaan.
Duruufaha kugu hurdaa
Awood hinjisay rabaan
Umaad dhalaan hootadee
Hilaadaha kaa gadmaa
Hariiryaha kugu dhigee
Adiyo hooskaad rabtana
Haadan baa kala dhex taal
Kartiyo waa howl-karnimo
Buundada lagu halabsadaa!!!!
Kaliilaha haad qattani
Hadh iyo hoosiis ka soon,
Inay hilbo doonayaa aan.
Waxa ay naftu hadhac degtaa
Hagoog iyo baadisooc
Markay leedahay haannaan
Hadday u higgaadiyaan
Qayrkeed kolba heel furaan
Waxa ay hindisan faraan
Waxa ay hidiyaan baraan
Inay tahay hoodadii
Waxa ay ka hawoon lahayd
Hadday ku hogaamiyaan
Waxa ay ku hagaagsanayd
Hadday ka habaabiyaan
Hugooga hadday tolaan
Habaarku ducuu noqdaa
Hadhow waxad haybisaa
Tags: Sidee Baan u Noqon Karaa Qof Naftiisa ku Kalsoon?
Next post Daryeelka Caruurta Dhasha Loo Sameeyo. Waa Maxay APGAR score ?.
Previous post Maxaa Sababa In uu Qofku Ka Cabsado Hawl uu Qabankarayo?